लकडाउनले बालबालिकालाई कस्तो असर पार्याे ? हेर्नुस् चलचित्र (भिडियोसहित) – Glammandu Online
निशा हुमाँगाई	 Sep 2, 2020
ग्ल्याममान्डु, काठमाडौं – देश विगत पाँच महिनादेखि लकडाउन र निशेधाज्ञाले बन्धक बनि रहेको बेला आम मानिसमा यसले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । अझ त्यसमा पनि बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी यसको मारमा छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मात्र होईन मध्यम वर्गीय नागरिकहरु पनि यतिबेला निम्न वर्गमा झर्न थालिसकेका छन् । यो बेलामा सरकारले मास्क र सेनिटाईजर अनिवार्य भनि रहेको छ तर नागरिकलाई भोको पेट भर्नुछ । मास्क र सेनिटाईजर होईन नागरिकलाई काम र माम चाहिएको छ । आम नागरिकको वर्तमान अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थाले बालबालिकाको भविष्यलाई कस्तो पर्वाह पार्ला ? अझ बेवारिसे बालबालिका भए के गर्लान् ?
माथी उल्लेख गरिएको प्रसंग हो भर्खरै सन्तोष राईले निर्माण गरेको लघु चलचित्र “प्रेमले सिकाएको बाटो” को । १८ मिनेट ५४ सेकेण्डको यस साईलेन्स स्टोरीले वर्तमान अवस्था मात्र होईन कोरोना संक्रमण पछि आउँने अवस्थालाई पनि छर्लङ्ग चित्रण गर्न सफल भएको छ । यो लघु चलचित्र अन्मिसम्म हेर्ने जो कोहीको आँखा रसाउँछ ।